Nandao An’i Etazonia Tsy Misy Resaka Nokleary Ny Praiminisitra Pakistaney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2015 18:53 GMT
Praiminisitra Pakistaney Nawaz Sharif. Sary avy amin'ny Flickr, DFID UK. CC BY
Nihaona tao Washington tamin'ny herinandro lasa ny Praiminisitra Pakistaney Nawaz Sharif sy ny filoha Amerikana Barack Obama. Talohan'ny ny fitsidihana, nisy ny sahoan-dresaka fa fandaharan'asa ara-nokleary ao Pakistana no ifantohan'ny resaka, saingy minitra fohy talohan'ny niafaran'ny fihaonana natao dokambarotra be dia nisy ny fanambarana iombonana nipoitra tao amin'ny habaky ny governemanta Pakistaney manazava fa nanamafy indray ny fahavononan'i Pakistan hiady amin'ny fampihorohoroana sy hanohana ny dingana ho amin'ny fandriampahalemana ao Afghanistan ny anton-dresaka.
Mpanao gazety Pakistaney Shaheen Sehbai nisioka hoe:
HAFAHAFA SY MISAFOTOFOTO: Mahavariana hoe nahoana ilay Fanambarana Iombonana [manana sakany] 2.784 tamin'ny fihaonan'i Nwaz-Obama no tao amin'ny habaky ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny Pakistaney kanefa mbola tsy mifarana akory ny fihaonana.
Nisioka ilay senatera Pakistaney Sherry Rehman:
Tena tsy mahazatra ny fanambarana iraisana lavabe miseho alohan'ny fiafaran'ny fihaonana! Resak'i Obama-Sharif
Nandanjalanja ny resaka ny hafa tao amin'ny Twitter:
Olona matoky #NawazSharif ao Etazonia. Efa very lanja ny paikady ‘Manaova betsaka‘, Etazonia manery an'i Pakistan amin'ny Fandaharan'asa Nokleary
Na dia eo aza ny dokambarotra rehetra amin'ny toby nokleary, toa momba ny resaka fandriampahalemana ny fandaharam-potoana lehibe amin'ny fihaonan'i Sharif / Obama.
Inona no andrasana amin'ny fitsidihan'ny praiminisitra any Etazonia. Hametraka teritery hifehezana ny fitaovam-piadiana nokleary ara-paikady i Washington
70 tapitrisa dolara hanabeazana ny tovovavy
Nihaona tamin'ny vadin'ny filoham-pirenena, Michelle Obama ihany koa ny vadin'i Sharif, Kulsoom Nawaz sy ny zanak'izy ireo vavy Maryam Nawaz.
Tonga tao Washington mba hijery ity taratasy avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena, Michelle Obama ity. Fihetsika mahafinaritra!
Nihaona nandritra ity fitsidihana fohy ity i Michelle Obama sy Maryam Nawaz, izay nanambaran-dRamatoa Obama fa hanome 70 tapitrisa dolara hanabeazana ny tovovavy ao Pakistana izy ireo.
Nisaotra an'i Obama mivady tao amin'ny Twitter avy eo i Maryam Nawaz, miaraka amin'ny famoahana sary fahatsiarovana avy amin'izy ireo, saingy kaonty diso no anarana voalazany tamin'ny siokany:
Misaotra @BarackObama sy @MichelleObama tamin'ny fandraisana mahafinaritra.
“Tigra Aziatika” malaza ao amin'ny Twitter i Nawaz Sharif
Nandritra ny fitsidihana, nisioka ny fitsidihana tamin'ny alalan'ny diezy tahaka ny #RealChangeWithRealPM (Fanovana marina miaraka amin'ny praiminisitra tena izy) sy ny #AsianTigerNawazSharif ireo mpanohana marobe an'i Nawaz:
Tamin'ny fitsidihany farany indrindra, nantsoin'i John Kerry hoe Nawaz izy nandritra ny fotoana vitsivitsy. Tamin'ity indray mitoraka ity, nandefa hafatra an'i Kerry ny masoivoho Pak ao DC mba hiantso azy hoe Andramatoa hajaina fa tsy Nawaz.
Ny tena fanambin'ny Praiminisitra Nawaz Sharif dia ny mampiditra ny Fitantanana Amerikana amin'ny fandaharam-potoana malalaka kokoa ankoatra an'i Afganistana, ireo sehatr'angovo mankany amin'ny fifandraisana ara-kolontsaina sy akademika!
Tonga ao Washington noho ny fanasan'ny Filoha Amerikana ny Praiminisitra Nawaz Sharif
Tsy mpanohana mafana fo ny #PMLN (Praiminisitra Nawaz Sharif) aho saingy mahita fiovana manodidina. mahatsiaro tsaratsara kokoa
Lehlahy be herim-po tanteraka i NS, sahisahy izy, tiako izy noho ny amin'izany, manana fitsipika ambony sy sahisahy! <3
Misy ireo hafa nihevitra fa afaka nandray anjara amin'ny fanoroana ny lalana marina amin'i Pakistana i Etazonia. Nanoratra tao amin'ny bilaogy Huffington Post momba ireo lohahevitra 10 tian'ny filoha Amerikana resahina miaraka amin'i Sharif amin'i Pakistana i Malik Siraj Akbar.
Fanantenana sy rehareha
Raha nanomboka ny fivoriana, nalaza tao Pakistana ny #AsianTigerNawazSharif sy #USPresident. Nisy ny tatitra tamin'ny haino aman-jery momba ny ‘ventim-pandaharan'asa miisa 14 ‘ izay natolotr'i Nawaz tamin'i Obama. Mpanohana marobe an'i Nawaz no nirehareha nahita azy miaraka amin'i Obama indray ary nanana fanantenana ao anatin'izany.
Iza no nilaza an-kerimpo ny Olan'i Kashmir teo amin'ny Sehatra Iraisampirenena….
Mino aho fa ny praiminisitra Sharif no tokony hanontany momba ny krizin'ny mpitsoaponenana Afgàna. Efa hipoka amin'ireo 3 tapitrisa mahery ao aminy i Pakistana.